Fianjerana fiaramanidina : Mpanamory roa sy ny namany telo maty tsy tra-drano -
AccueilRaharaham-pirenenaFianjerana fiaramanidina : Mpanamory roa sy ny namany telo maty tsy tra-drano
Razafindrakoto Eddie Charles 55 taona , Razafindrakoto Andry 13 taona, Ranaivoarisoa Claude 65 taona, Razafimanantsoa Kevin 23 taona ary Andrianarijaonina Mamy Tahiana 26 taona, ireo olona dimy namoy ny ainy vokatry ny fianjerana fiaramanidina teny Ampangabe, distrikan’Ambohidratrimo omaly maraina. Mpianaka ireo roa voalohany, raha toa ka mpanamory sy mpianatra ireo telo ambiny.
Mpanamory roa, mpianatra roa ary zanaky ny iray tamin’ireo mpanamory no maty tsy tra-drano vokatry ny fianjerana fiaramanidina kely mitondra ny marika PA31 Navajo 5R-MKF, an’ny orinasam-pitaterana an’habakabaka “ Madagascar Trans Air” (MTA) omaly teo anelanelan’ny tamin’ny 09 ora sy sasany sy tamin’ny 10 ora maraina. Teny Antanimeva, fokontany Ampandrialaza, kaomina ambanivohitra Ampangabe, distrikan’Ambohidratrimo no nitrangan’ity lozam-piaramanidina ity. Araka ny nambaran’ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia mbola tsy fantatra mazava no tena nahatonga ny fianjerana noho ny tsy fisiana “boite noire” tao anatin’ity fitaovam-pitaterana ity, ary mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka izy ireo amin’izao fotoana izao. Ny azo ambara kosa, dia fantatra fa ireo mpanamory roalahy no nitondra ity fiaramanidina izay niainga teny Ivato ity. Razafindrakoto Eddie nisahana ny resaka “contrôle” raha toa nanao ny “examinateur” I Ranaivoarisoa. ” Nihodinkodina teo amin’ny manodidina izy ireo, ary mbola tsy nitondra ireo mpianatra roalahy fa nijery fotsiny ny fomba fanamoriana io fitaovam-pitaterana io”, hoy ny fanampim-panazavana avy eo anivon’ity vondron-kery ity.
Hatairana ny an’ireo olona teny amin’ny manodidina rehetra raha naheno ny fidobok’ity fiaramanidina izay nianjera teny an-tanimbary ity. Izy ireo no nampandre ny ben’ny tanàna tao an-toerana, ary ity farany indray no niantso ny zandary sy ireo tompon’andraikitra hafa voakasika amin’izany taorian’izay. Noho ny halaviran-dalana, dia tamin’ny 11 ora tany ho any vao nigadona teo an-toerana ireo mpitandro filaminana niaraka tamin’ny “corps de protection civil” an’ny eo anivon’ny tafika, sy ireo mpamonjy voina. Tsy niandry ela fa niroso avy hatrany tamin’ny fisokirana ireo vata-mangatsiaka izay potika tanteraka ireo manam-pahefana isan-tsokajiny niaraka tamin’ny fanampian’ireo mponina tao amin’ity fokontany voalaza etsy ambony ity. Tamin’ny 12 ora antoandro teo no tafavoaka ireo razana telo voalohany, raha toa ka mbola nitohy io omaly io hatramin’ny 04 ora tolakandro ny fitadiavana ireo roa ambiny. Izy dimy ireo ihany moa no tao anatin’io fitaovam-pitaterana an’habakabaka io, izay marihina fa samy nofonosina teny an-toerana avokoa alohan’ny nitondrana ireo razana tamin’ny angidimby sy nandefasana izany teny amin’ny tranom-patin’ny hopitalin’ny miaramila etsy Soavinandriana. Ankoatra izao famoizan’aina izao moa, dia niparitaka tsy nisy azo noraisina intsony io fiaramanidina kely io.